प्रधामन्त्रीलाई महेन्द्र राय यादवको प्रश्न–नाकाबन्दी कसले गरेको हो?
04 Feb 2016 | 13:27pm
काठमाडौं–तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं मधेसी मोर्चाका नेता महेन्द्र राय यादवले नाकाबन्दी मोर्चा गरेको की भारत गरेको हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्।
'मोर्चाका नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दी खोल्दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ,' उनले भने,' फेरि भारतले नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत जान्न भन्नुहुन्छ। नाकाबन्दी कसले गरेको हो ?' उनले मुलुलभित्रको समस्या समाधान नगरी प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानु ठिक नभएको भन्दै वार्ताको माध्यमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
उनले मोर्चाका कार्यकर्ताले नाकामा अबरोध गरेको भन्दै भारतले नाकाबन्दी लगाएको भनेर देशभित्रको समस्या समाधान गर्नबाट प्रधामन्त्री भागेको आरोप लगाए। उनले शुक्रबार बस्ने मोर्चाको बैठकले नाकाबन्दीलगायत समग्र विषयमा छलफल गर्ने भन्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने विषयमासमेत बैठकमा छलफल हुने बताए।
नयाँ संविधान र सीमाकंनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चा साउन ३० देखि आन्दोलनमा रहेको छ। मोर्चाको विरोधकाबीच असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले असोज ४ देखि अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ।